By Aurora 10 October 2019
မင်းသမီး ဂုံဟိုဂျင်းက ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော် ထိပ်တန်းစာရင်းဝင် မင်းသမီး တလက်ပါ။ ၁၉၉၉ ခုနှစ် စတင်ပွဲထွက်ခဲ့ကတည်းက ရုပ်ရှင်၊ ဇာတ်လမ်းတွဲပေါင်းများစွာမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး အောင်မြင်ကျော်ကြား လာခဲ့သူပါ။
မကြာခင်က အွန်လိုင်းပေါ်က Forum စာမျက်နှာမှာ တက်လာတဲ့ ပို့စ်တခုအရ ပရိသတ်တွေဟာ မင်းသမီးရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ပိုသတိထားမိလာကြပါတယ်။ ဒီပို့စ်မှာ ဖော်ပြချက်အရ မင်းသမီး ဂုံဟိုဂျင်းဟာ စတင် ပွဲထွက်ကတည်းက ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေအကုန် ကြည့်ရှုနှုန်း မြင့်ခဲ့သလို၊ လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။
သူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲမှာ ပထမဦးဆုံး ၂၀၀၂ ခုနှစ် MBC ရုပ်သံလိုင်းက ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ “Ruler of Your Own World” မှာ ၂၀ ဒဿမ၂ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့သလို၊ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ပဲ Popularity Award ကိုပါ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
နောက်တကားကတော့ ၂၀၀၃ ခုနှစ် MBC ရုပ်သံလိုင်းကနေပဲ ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး မင်းသား ကင်ရယ်ဝန်နဲ့ အတူ သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ “Snowman” ဇာတ်ကားဟာ ရိုက်ကူးခဲ့သမျှ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲမှာ အအောင်မြင် ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး ကြည့်ရှုနှုန်း ၂၄ ဒဿမ ၈ ရာခိုင်နှုန်းထိ ရှိခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်း ဇာတ်တိုက်ဆိုသလို ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ၂၀၀၃ မှာပဲ “Sang Doo! Let’s go to School” ၊ ၂၀၀၇ မှာ “Thank You”၊ ၂၀၁၀ မှာ “Pasta” အစရှိတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာလည်း ကြည့်ရှုနှုန်းဟာ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ထိ အမြဲရှိခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၁ က မင်းသား ချားဆန်ဝန်နဲ့ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ “The Greatest Love”၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ မင်းသား ဆိုဂျီဆပ်နဲ့ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ “Master’s Sun” ဇာတ်ကားတွေမှာလည်း ကြည့်ရှုနှုန်း ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရခဲ့ပါတယ်။ မင်းသမီး ဂုံဟိုဂျင်း ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲမှာ ကြည့်ရှုနှုန်း အနိမ့်ဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်က “It’s Ok, That’s Love” ဇာတ်ကားတောင် ၁၂ ဒဿမ ၉ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့တာပါ။
နောက်ဆုံး ထွက်ရှိထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲကတော့ KBS2 ရုပ်သံက ထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့ မင်းသား ဂန်ဟာနူးနဲ့ အတူ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ “When the Camellia Blooms” ဟာလည်း ဗုဒ္ဓဟူး-ကြာသပတေး နေ့ ပြသတဲ့ ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ ကြည့်ရှုနှုန်း အမြင့်ဆုံး ဖြစ်နေပါတယ်။
မင်းသမီး ဂုံဟိုဂျင်း သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို ခြုံကြည့်လိုက်ရင် ပရိသတ်တွေ ထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့သလိုပဲ သရုပ်ဆောင်သက်တမ်း နှစ် ၂၀ အတွင်းမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေအကုန် အောင်မြင်မှုကို စိုက်ထူးထားနိုင်တဲ့ မင်းသမီးတယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဘူဆန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ ထိပ်တန်း ရုပ်သံဒရာမာဆု ရရှိခဲ့တဲ့ “Mr. Sunshine” ကိုရီးယားစီးရီး
ဒုတိယမြောက် Season အနေနဲ့ ရိုက်ကူးဖို့ ရှိနေတဲ့ ‘Arthdal Chronicles’ စီးရီး
Topics: ဇာတ်လမ်းတွဲ, မင်းသမီး ဂုံဟိုဂျင်း